ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားနားတွင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်….z – Alanzayar
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားနားတွင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်….z
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားနားတွင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်….
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားနားတွင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ရန်ကုန်မြို့…
ရွှေတိဂုံဘုရား အနီးတွင်ဘိုးတော်တစ်ယောက်ဗေဒင်ဟောနေတာကိုဘေးကလူငယ်အုပ္စု ၄/၅ယောက္ကလှောင်သလိုလိုပြောင်သလိုလိုနဲ့မျက်နှာပြောင်နေကြ လေသည် …။ ကြာလာတော့ ဘိုးတော်လဲ ဒေါသထွက်ပြီး…
`ဟေ့ကောင်တွေမင်းတို့ငါကိုဘာထင်နေလဲ?ငါကျိန်စာတိုက်အင်းခွက်ရေးလိုက်ရင် ….မင်းတို့ဘဝတွေဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ အဲ့ဒါကို လူငယ်အုပ်စုက မကြောက်တဲ့ အပြင်ခွက်ထိုး ခွက်လန် ဟားတိုက်ရယ်မောပြီး လှောင်ပြောင်နေကြသေးသည် …။…
ဒါပေမယ်…ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသူတို့မျက်လုံးတွေဘာမှမမြင်ရတော့ပဲတစ်လောကလုံးမှောင်မဲ သွားလေတော့သည် …။ အဲ့သည့်တော့မှသူတို့လဲအသိတရားဝင်လာကြပြီး`အဖိုးရယ်သားတို့ မှားသွားပါတယ် သားတို့ကိုခွင် လွှတ်ပေးပါ´´ လို့အော်ကြဒါပေါ့ အဲချိန်မှာဘိုးတော်ပြန်ပြော လိုက်တဲ့စကားက`မသာတွေငါဘာမှ မလုပ်ရသေးဘူး ….။….
မင်းတို့ပထွေးEPC က မီးဖြတ်လိုက်တာကွ၊ ငါလဲဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး ….။´´ပျော်ရွှင်ပါစေ နော် ….အိမ်မှာနေနေရတာ ပျင်းမှာဆိုးလို့ အပျင်းပြေလေး တင်ပေးတာပါမဆဲရဖူးနော်…။ဟာသလေးကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ပြန်လည်ပီး မျှဝေလိုက်ပါ…မူရင်းရေးသားသူအားလေးစားစွာဖြင့် —….
ရနျကုနျမွို့ ရှတေိဂုံဘုရားနားတှငျ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ ဖွဈရပျတဈခုဖွဈပျေါ…။
ရနျကုနျမွို့ ရှတေိဂုံဘုရားနားတှငျ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ဖွဈရပျတဈခု ဖွဈပျေါရနျကုနျမွို့..။
ရှတေိဂုံဘုရား အနီးတှငျဘိုးတျောတဈယောကျဗဒေငျဟောနတောကိုဘေးကလူငယျအုပ်စု ၄/၅ယောက်ကလှောငျသလိုလိုပွောငျသလိုလိုနဲ့မကျြနှာပွောငျနကွေ လသေညျ …။ ကွာလာတော့ ဘိုးတျောလဲ ဒေါသထှကျပွီး။
`ဟကေ့ောငျတှမေငျးတို့ငါကိုဘာထငျနလေဲ?ငါကြိနျစာတိုကျအငျးခှကျရေးလိုကျရငျ ….မငျးတို့ဘဝတှဘောဖွဈသှားမယျထငျလဲ အဲ့ဒါကို လူငယျအုပျစုက မကွောကျတဲ့ အပွငျခှကျထိုး ခှကျလနျ ဟားတိုကျရယျမောပွီး လှောငျပွောငျနကွေသေးသညျ …။
ဒါပမေယျ…ခကျြခငျြးဆိုသလိုပဲသူတို့မကျြလုံးတှဘောမှမမွငျရတော့ပဲတဈလောကလုံးမှောငျမဲ သှားလတေော့သညျ …။ အဲ့သညျ့တော့မှသူတို့လဲအသိတရားဝငျလာကွပွီး`အဖိုးရယျသားတို့ မှားသှားပါတယျ သားတို့ကိုခှငျ လှတျပေးပါ´´ လို့အျောကွဒါပေါ့ အဲခြိနျမှာဘိုးတျောပွနျပွော လိုကျတဲ့စကားက`မသာတှငေါဘာမှ မလုပျရသေးဘူး ….။..။
မငျးတို့ပထှေးEPC က မီးဖွတျလိုကျတာကှ၊ ငါလဲဘာမှမမွငျရတော့ဘူး ….။´´ပြျောရှငျပါစေ နျော ….အိမျမှာနနေရေတာ ပငျြးမှာဆိုးလို့ အပငျြးပွလေေး တငျပေးတာပါမဆဲရဖူးနျော…။ဟာသလေးကို နှဈသကျတယျဆိုရငျ ပွနျလညျပီး မြှဝလေိုကျပါ…မူရငျးရေးသားသူအားလေးစားစှာဖွငျ့ —။
Previous Article ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး နီးပါး ဖြစ်သွားတာပါ……see more
Next Article ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားနားတွင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်….1